I-Rynek 6 Apartment - I-Airbnb
I-Rynek 6 Apartment
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguGrzegorz
Le ndlu ikwindawo yembali yesixeko ngokujonga iHolo yeSixeko. Imi kwenye yezindlu ezibuyiselweyo ezikwindawo yemarike yaseBolesławiec. Unokuziva usekhaya kwiflethi enefenitshala ngokukhululeka.
Indlu ilungile kwiMarket Square. Ikhazimle, ihonjiswe ngokunambitheka okukhulu, iifestile ezimbini ezijonge kwiMarket Square. Bafumana ilanga elininzi emini. Ngokuhlwa unokuncoma ukukhanya okumibalabala komthombo kunye nezindlu.
Kukho iicafe kunye neeresityu ezinesidlo sasekhaya kunye ne-bistro kule ndawo. Iindwendwe zeeApartments ziyavuya ukusebenzisa unikezelo lwevenkile yasekhaya ye-pastry kwi-Market Square. Kufuphi, kukho iibhafu zetyuwa yedolophu, indawo yokuthenga, icinema kunye nendawo yolwazi lwabakhenkethi.
Nceda uqhagamshelane nomhlali wethu ngefowuni ngaphambi kokufika, oya kuba ngumgcini wakho ngexesha lonke lokuhlala. Sithumela umnxeba kumhlali kunye nezalathiso kunye nolwazi malunga nendawo yokupaka emva kokubhukisha. Umhlali uya kukunceda ukuba ufumane malunga neendawo ezikhangayo zedolophu, ukucebisa ukutya kwendawo kunye nokubonelela ngeempendulo ezinxulumene nemithetho yokuhlala. Ukongeza, uya kujonga iimfuno zakho kwaye uya kuzalisekisa ngovuyo naziphi na izicelo ezinxulumene nezibonelelo ezongezelelweyo kwiApartment.
Nceda uqhagamshelane nomhlali wethu ngefowuni ngaphambi kokufika, oya kuba ngumgcini wakho ngexesha lonke lokuhlala. Sithumela umnxeba kumhlali kunye nezalathiso kunye nolwazi malu…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Bolesławiec